तीन अस्पताल तयारी अवस्थामा
काठमाडौं, माघ २२–चीनमा हड्डी तथा नसामा एमडी गरिरहेका डा. श्रवण श्रेष्ठ स्वदेश फर्कंदै छन् । नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि त्रासमा रहेका डा. श्रेष्ठ बस र विमानबाट आउन लागेका हुन्। चीनका विभिन्न सहरमा अध्ययन र व्यवसाय गरिरहेका नेपालीलाई ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उनीहरूलाई बसोबास गरिरहेका विभिन्न सहरबाट बसमा उहानमा ल्याइनेछ । ‘सबैलाई एकत्रित गर्न दुई–तीन दिन लाग्छ । बसमा एक ठाउँमा ल्याई स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्र विमानमा ल्याइनेछ’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने ।
श्रवण प्रवक्ता श्रेष्ठका छोरा हुन् । ‘सियानमा पढ्दै छ। सबै घर फर्कन थाले। म पनि आउँछु भन्यो । एक्लै बस भन्नु पनि भएन’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। यसरी फर्किएका नेपालीलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले एक्टिभ सर्भिलेन्समा राख्न सुझाव दिएको छ। ‘चीनबाट आएका नेपालीलाई कुनै बिरामी भएको अवस्थामा निगरानीमा राख्ने र तुरुन्तै उसको उपचार गर्ने सन्देश हो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
उद्धार गरिएका नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ। समस्या भए तोकिएको अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिने उनले जानकारी दिए । संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार संक्रामक रोग फैलने सम्भावना भएको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई अस्पताल वा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्नुपर्छ ।
भाइरस संक्रमण देखिएमा आइसोलेसनका लागि तीन वटा अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र वीर अस्पताललाई आइसोलेसन बेडको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट